Gosi na I Kwetasiri ike n’Ihe Ị Na-ekwu | Ịgụ Ihe na Izi Ihe
IHE ỌMỤMỤ NKE 15
Gosi na I Kwetasiri ike n’Ihe Ị Na-ekwu
1 Ndị Tesalonaịka 1:5
IHE Ị GA-EME: Kwuo okwu otú ga-egosi ndị ị na-agwa okwu na i kwetasiri ike na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu nakwa na ọ dị ezigbo mkpa.
Kwadebe nke ọma. Mụọ ihe omume gị nke ọma ruo mgbe ị ghọtara otú amaokwu ndị dị na ya si gosi na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu. Gbalịa ka i jiri okwu ndị dị mfe kọwaa isi ihe ndị dị n’ihe omume gị. Lekwasị anya n’uru ọ ga-abara ndị na-ege gị ntị. Kpeekwa ekpere ka Chineke nye gị mmụọ nsọ ya.
Mgbe ị na-amụgharị ihe omume gị, na-ekwupụta ya ekwupụta ka o nyere gị aka ịghọta ya nke ọma, meekwa ka ọ gaa gị werewere n’ọnụ.
Jiri okwu ndị ga-egosi na obi siri gị ike n’ihe ị na-ekwu mee ihe omume gị. Kama ịgụpụtawa ihe e dere n’akwụkwọ, jiri okwu nke aka gị kwuo ya. Jiri okwu ndị ga-egosi na ihe ị na-ekwu doro gị anya mee ihe omume gị.
Jiri ịnụ ọkụ n’obi kwuo okwu. Welite olu mgbe ị na-ekwu okwu. Na-ele ndị ị na-agwa okwu anya ma ọ bụrụ na ọ dịghị njọ ime otú ahụ n’obodo unu.
Ekwela na ihe ị na-ekwu doro gị anya nke ọma kwuo okwu otú ga-eme ka ahụ́ ghara iru ndị mmadụ ala ma ọ bụ kwuwe uche gị ma ọ bụkwanụ manyewa ha ime ihe i kwuru. Ọ bụrụgodị na ihe ị na-ekwu na-anụ gị ọkụ n’obi, meda obi kwuo ya otú ga-egosi na ị hụrụ ndị ị na-agwa okwu n’anya.
Ịgụ Ihe na Izi Ihe​—⁠Gosi na I Kwetasiri ike n’Ihe Ị Na-ekwu